Qiso jaceyl oo gaaban qeybtii 1-aad
Maxaan ugu talo galnay akhristayaasheena sharafta badan? Jawaabta, qisooyin jaceyl ah oo macaan qaasatan Qiso jaceyl oo gaaban.
Waxaan shaki ku jirin inaan had iyo jeer u taagnaan doono tixgelinta codsiyada inooga yimaado akhristayaasheena sharafta badan si ay uga faaiidaan qormooyinka xiisaha leh ee aan ugu talo galnay.
Halkani waxaan ku soo bandhigi doonaa qiso jaceyl oo taxane ah qeybtii koobaad. Inaad akhrisato qiso jaceyl ah kaama saacidi doonto oo kaliya akhrinta qoraalada aduunka iyo koritaanka maskaxda ee waxay kaa saacidi doontaa inaad wax ka ogaato jaceylka dhabta ah iyo halka uu gaarsiisanyahay.
Qiso walbaa waxay xambaarsantahay murti iyo dareen gaar ah sidaa darteed waa muhiim inaan wax ka barano qisooyinka aduunka.
Kulamaa aad wax akhriso ma kobcayo barashada akhrinta afka Soomaaliga oo kaliya ee waxaa kobcayo maskaxdaada (Intelligence quotient (IQ). Waxaa aduunka ka dhacay qisooyin kala duwan kuwaasoo laga qoray marxalado kala duwan. Hadaba aan ku bilaawno qiso jaceyl oo taxane ah qeybteedii koobaad.
Wiil ayaa shukaansi la lahaa gabar had iyo jeer dhaawaceysay qalbigiisa. Maalin maalmaha ka mid ah, way kala tageen oo waxay ku tiri, "Weligay ma doonayo inaan dib kuu arko." Dhawr bilood ka dib, gabadhii qalbigeedu waa is beddelay. Waxay garwaaqsatay inay wiilka weli jeceshahay, markaasay dib u soo noqotay oo ku tiri, "hal fursad oo kaliya isii. Waan ku jeclahay waana kuu baahanahay. Waxaan kuu balan qaadayaa inaanan markale ku dhaawici doonin" Laakiin wiilkii intuu qoslay ayuu ku yiri, "Doqon uun baa ceshan lahaa qof aad wax yeeleysay. Gabadhii waxay dareentay rajo la'aan waxayna bilawday inay ooyso, laakiin wiilkii intuu labadíisa gacmood kala furay ayuu laabta geliyay misana ku yiri "... oo anigu waxaan ka mid ahay nacasyadaas."
La soco qeybta labaad, waxaan rajeyneynaa inay ku cajab gelisay. Haddii ay jawaabtaadu haa tahay, halka hoose comment inoogu reeb.
Haddii aad jeceshahay inaad noqoto akhristaha ugu horeeyo fadlan halkaan hoose iska diiwaan geli, haddii aadan horay isu diiwaangelin: Akhristayaasha Erayo Jaceyl